Nsọpụrụ V10: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gosipụtara | Gam akporosis
The Honor V10 bụ onye ọrụ ugbu a: Mara nkọwa ya
Eder Ferreño | | Mobiles
El Honor V10 bụ otu n'ime ekwentị ndị jidere akụkọ kachasị na izu ndị na-adịbeghị anya. E gosipụtara ngwaọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China na November 28 na mba ya. Otu izu gara aga nkọwa mbụ nke otu. Ma, ọ bụ n'ikpeazụ ukara. Anyị amatala ihe niile gbasara Honor V10 a.
Nke a tụrụ anya ngwaọrụ bụ elu nke elu ugwu ahụ, na otu a ka o siri dị. Ngosipụta nke gọọmentị nke isi ọhụụ Honor adịghị emechu ihu. Na omume na China akọwapụtara nkọwa, ọnụahịa na nnweta ngwaọrụ ahụ. Gịnị ka anyị ga-atụ anya?
Este Honor V10 na-enye ike, nnukwu imewe nwere ihu ihu ihu abụọ dịkwa yana ọtụtụ agba. Na mgbakwunye inwe gam akporo Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ. N'ihi ya, obi abụọ adịghị ya na njedebe dị elu nke na-aga n'ike. Na mgbakwunye, ọ na-eme ya na ọnụahịa dị oke ala karịa ekwentị ndị ọzọ na mpaghara ahịa a. Anyị na-ahapụ gị mbụ na nkọwa nke ngwaọrụ a.
1 Nkọwa zuru ezu Sọpụrụ V10
Nkọwa zuru ezu Sọpụrụ V10
Usoro njikwa Gam akporo 8.0. Oreo na EMUI 8 dị ka akwa nhazi
Ihuenyo 5.99 sentimita asatọ 2.160 × 1.080 px na 18: 9 ruru
Nhazi Kirin 970 nwere NPU maka ọgụgụ isi
Nchekwa n'ime 64GB / 128GB gbasaa ruo 256 site na microSD
Igwefoto na-aga n'ihu igwefoto abuo 20 Mpx monochrome na 16 Mpx RGB na OIS nwere oghere f / 1.8 na 4K ndekọ
Igwe n'ihu 13 Mpx nwere oghere f / 2.0
Njikọ Na atọ: USB Type C LTE 4G WiFi Dual Band NFC na Bluetooth 4.2
Batrị 3.750 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ 157 × 74.98 × 6.97 mm.
Ibu ibu 172 grams
O doro anya na nke a Sọpụrụ V10 na-ahapụ ezigbo mmetụta. The ụlọ ọrụ nwere ghaghị tụrụ kemgbe ngwaọrụ nweela gam akporo Oreo. Ihe a na-atụ anya na njedebe dị elu, mana ọ dị mma mgbe niile ịhụ na ụdị ejiri ya kpọrọ ihe.
N'ozuzu, anyị nwere ike ịhụ na nkọwapụta nke ngwaọrụ a zuru oke. Yabụ na enwere obi abụọ na ya nwere ike ịsọ mpi na ụdị ndị isi na ahịa.
El A mara ọkwa na Honor V10 na China. Ihe ngosi nke ngwaọrụ na Europe ga-abụ izu na-abịa. Yabụ, anyị ga-echere ịmara mbata ya na ahịa mba ụwa. N'oge ahụ, maka ndị niile ahụ na China, ekwentị ga-adị maka ịzụta site na December 5.
Na mgbakwunye, anyị enweela ike ịmata ọnụahịa ngwaọrụ na mba Eshia. Dị ka ị hụworo na nkọwa ya, enwere ọtụtụ nsụgharị dị dabere na RAM na nchekwa. Ndị a bụ ọnụahịa nke nsụgharị Honor V10:
Sọpụrụ V10 na 4 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa: euro 344 ịgbanwe (2699 yuan)
Sọpụrụ V10 na 6 GB nke Ram na 64 GB nke nchekwa: euro 382 ịgbanwe (2999 yuan)
Sọpụrụ V10 na 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa: euro 446 ịgbanwe (3499 yuan)
Site na ihe ị ga - ahụ na ọnụahịa ha dị ntakịrị karịa nke ngwaahịa ndị ọzọ dị elu na ahịa. Obi abụọ adịghị ya na ihe ga - enyere ngwaọrụ Honor a aka nke ọma. Kedu ihe ị chere nke ekwentị ọhụrụ a site na ika ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The Honor V10 bụ onye ọrụ ugbu a: Mara nkọwa ya
Aesthetically ọ mara mma. Ike na-esonyere. Ọ ga-adị mkpa ịhụ ma ọ sonyere igwefoto nke ọma na omume, ebe ebe ikpeazụ nke Xiaomi na-akọwa.
Vernee M5 nyocha
Samsung na-arụ ọrụ na batrị graphene na ogologo oge